Utezọ nke Ferro na Andorra | Akụkọ Njem
Zọ nke Ferro na Andorra
Maria | | Getaways, General, Iso umuaka eme njem
Foto | Mgbapụ nke ime obodo
Otu ụzọ dị mfe iji malite ụmụaka ịga njem bụ Ruta del Ferro na Andorra. Enwere ike ịnweta ya nke na enwere ike ịgwa ya onye ọ bụla n'agbanyeghị afọ ole ma ọ bụ ọnọdụ anụ ahụ.
Aha nke uzo a na-ezo aka idi nkpa ahia nke ígwè maka Onye isi nke Andorra, n'ozuzu ya, na parish nke Ordino, karịsịa, n'oge narị afọ nke iri na asaa na nke iri na itoolu. Ya mere, ọ bụ ụzọ na-ekpughe ịdị arọ nke ọrụ igwe na mpaghara a yana ala mara mma nke Andorran.
1 Ferzọ Ferro
2 Utezọ nke alzọ Ral
3 Ndụmọdụ maka ịzọ ụgbọ okporo ígwè
Okporo ụzọ Andorra bụ n'ezie ụzọ ọdịnala na nke okike si gbasaa ebe ndị ọzọ na Pyrenees, dịka Catalonia, Aquitaine, Ariège, Vizcaya na Guipúzcoa. N'ihi mmasi ya, na eziokwu ahụ dabara na ndị niile na-ege ntị yana njikọta n'etiti mba, na 2004 Ruta del Ferro natara aha ọma nke Council nke Europe.
Utezọ nke alzọ Ral
Ka unu wee mee Ferro Nsoro dị ka ezinụlọ, anyị na-amam na ụzọ nke Ral Pzọ, n'etiti obodo nke La Cortinada na Llorts, nke a na-eme mfe, na o siri ike ọ bụla unevenness na-ekpori ndụ ụfọdụ obi ụtọechiche dable.
Zọ ụgbọ okporo ígwè na-amalite n'akụkụ ebe nchekwa ụgbọ ala Llorts Mine, ebe enwere ike dọba ụgbọala. Pathzọ mgbada anyị ga-aga na La Cortinada na nke m dịdebe ebe a na-adọba ụgbọala.
Ngwuputa a bu ihe diri ndi bi na obodo ntunye ugwu a. N'oge ọkọchị, a na-enye ndị ọbịa ohere ịme njem na-eduzi n'ime ebe a na-egwupụta akụ yana ịchọpụta ngosipụta na-adịgide adịgide nke ihe osise oge a na-akpọ Camino de los Trajinantes yana ohere ịga ije n'okporo ụzọ Iron Men.
Tinyere Sedomet na Ransol mines, ndị Llorts Mine nyere nri ndị dị na mpaghara ahụ, ọ bụ ezie na nke ikpeazụ a na-arụ ọrụ naanị afọ anọ n'ihi obere igwe dị n'ime.
N’ịga ụzọ n’ihu nke m, anyị ga-ahụ isi okwu dị iche iche ejiri akara na-egosi ọnụọgụ ndị na-egosi ebe ndị nwere mmasị na njem.
Point 1: Ọ bụ nkume metamorphic nke ejirila rụọ ụlọ elu ụlọ na Andorra.
Isi nke 2: O bu ihe sitere n’okike nke nwere igwe n’ukwu ya.
Isi nke 3: Anyi na-eche ihu ebe di nkpuchi nke moss na umu osisi ndi ozo juputara.
Point 4: N'aka ekpe bụ ụzọ na-eduga na Bordas de Ensegur. N’oge gboo, ndị mmadụ si n’obodo dị iche iche na-abịa n’ebe a n’oge ọkọchị ha na anụ ụlọ ha ịgafee oge. Ọ bụ saịtị nwere ọtụtụ ụlọ na ahịhịa. Na mgbakwunye, na ndagwurugwu Ensegur ị nwere ike ịme canyoning.
Point 5: Site na ebe a ị nwere ike ịmụ ahịhịa nke mpaghara ahụ n'ụzọ zuru oke
Point 6: ọ dị ntakịrị n'ihu, ebe a na-echedo ụzọ ahụ site na mgbidi mgbidi a na-akpọ mgbidi nkume akọrọ nke rụrụ ọrụ iji gbochie ịbanye ehi na transhumance.
Isi 7: Anyị na-achọta Les Moles Bridge, obe dị n’etiti okporo ụzọ Tal na nke na-aga Llorts. Mgbe mita ole na ole na-eje ije, anyị ga-ahụ ala ahịhịa nke nwere ihe osise 7 n'èzí nke Iron Men site n'aka onye ọrụ France bụ Rachid Khimoune.
Isi 8: routezọ ụgbọ okporo ígwè na-aga n'ihu na-agbada na n'aka nri bụ Puente del Vilaró, na-esote ebe izu ike. N'oge na-adịghị anya, ụzọ ahụ gafere site na gunwale na site na Vilaró forge, bụ ebe a na-enweta iron site na mbelata kpọmkwem ịnweta nke amịpụtara na mines.
Isi 9: Mgbe nke a gasịrị, anyị na-aga n'ihu na ọdịda nke ndagwurugwu dị n'etiti nnukwu ala ahịhịa juru wee hapụ ụzọ dị iche iche n'aka ekpe nke gbagoro na ndagwurugwu Ensegur. Anyị nwere ike ịhụworị ụlọ Arans dị na ndabere na aka nri. Ọ bụrụ na anyị gaba n’ihu ije anyị ga - abanye n’ọdụ ụgbọ mmiri Arans.
Point 10: Ka anyị na-abịaru La Cortinada nso, osimiri Valira del Nord na-abịarukwu nso. Na mpaghara a, mmiri nwere agba ọbara ọbara n'ihi nnukwu ígwè dị n'ime ala ọ na-eburu. Gbaso ụzọ na-agafe site na Mas de Soler mill, anyị erutela La Cortinada.
N'ịgafe akwa mmiri nke gafere n'akụkụ nke ọzọ nke Osimiri ahụ, anyị rutere na Cal Pal sawmill and mill, ụlọ abụọ dị na narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. Thelọ ọrụ ndị njem nleta na-enye njem nlegharị anya n'oge ọkọchị.
Point 11: Mgbe anyị na-agafe n'okporo ụzọ anyị na-ahụ otu n'ime akara nke Ndagwurugwu Ordino n'ihi akụ na ụba ya na ọdịbendị: ụka nke Sant Martí de La Cortinada (1: 00h - 1.330m). Ejikọtara ụlọ ahụ na Rozọ Irongwè n'ihi na ihe ntụchi nke nnukwu ebe ịchụàjà na ụlọ ụka ndị dị n'akụkụ bụ nke e ji ígwè si n'ógbè ahụ mee.
Maka nloghachi, ị ga-edozi ụzọ niile na ihe dịka elekere ị ga-alaghachi na Llorts Mine.
Ndụmọdụ maka ịzọ ụgbọ okporo ígwè
Budata ngwa nchekwa ubi nke na-enye ndị hikers ohere iziga ọnọdụ ha kpọmkwem iji zọpụta ndị otu na mberede.
Na-asọpụrụ okike: nwee ọ enjoyụ n’ime obodo ma hapụ ya ka ị si hụ ya.
Na-a smallụ obere obere ugboro ugboro. Mmeghe mmiri ga-eme ka ụzọ niile dị dum.
Ọ bụrụ na i ruo n’akụkụ nke i chere na ọ dị ize ndụ ma ọ bụ nke karịrị ike gị, ọ ga-aka mma ka ị gbanwee.
Lelee amụma ihu igwe maka ebe, ụbọchị na oge ọpụpụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Zọ nke Ferro na Andorra
Ihe ị ga-ahụ na Polignano a Mare